Farxiyo Mohamed oo ah gabar samafale ah oo lagu soo dhoweeyay Norwey. | Qurbaha.Net :: Isha Wararka Soomaalida Qurbaha
Home Somali News Farxiyo Mohamed oo ah gabar samafale ah oo lagu soo dhoweeyay Norwey.
Farxiyo Mohamed oo ah gabar samafale ah oo lagu soo dhoweeyay Norwey.
Magaalada Drammen ee dalka Norwey oo qiyaas ahaan 36 km u jirta Caasimada Norwey ee Oslo ayaa waxaa ka dhacay munaasabad marti qaad ah oo loo sameeyay Samafasho Farxiyo Mohamed Mire oo ka mid ah haweenka samafalayaasha ee ku nool dalka Talyaaniga.
Munaasadaani oo uu sameeyay Laashin Axmadeey Cabshi Gaashaan oo isaga oo dhaawac ay dalka dibadiisa u soo qaaday Farxiyo ayaa waxaa kasoo qeyb galay qaar ka mid ah Jaaliyadda Soomaalida ee Norwey.
Wariyayaal, saraakiil abwaano iyo fanaaniin ayaa xaflada ku sugna iyadoo si weyn loogu mahadceliyay Samfasho Farxiyo Maxamed.
Abwaan Axamdeey Cabdi Gaashaan oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in Farxiyo ay garab istaagto dadka tababarta yar ee u baahan garab istaaga dhabta ah islamarkaana uu u hayo abaal aan la iloobi Karin.
Bashir Khalif Gani oo u hadlayay saxafaiyiinta goobta ku sugnyed ayaa isna amaanay howsha ay u heyso walaalaha Soomaalida Farxiyo Maxamed.
Hoos ka daawo sawirada xaalada loogu soo dhaweeyay.
Previous articleSaxarla Cabdullaahi: Gabadhii ugu horraysay ee Soomaali ah ee Addis Ababa xildhibaan ka noqota
Next articleXuseen Nuuriyow ” Reer Norwey wixii ay uga baahdaan gobolka Banaadir aniga ayaa ka caawinaya“